Noma yimuphi wesikole uyazi ukuthi umhlaba nxazonke, futhi zonke izingxenye zomhlaba lilinganiselwe kuphela. Ngakho kungani amazwe ase-Asia ngokuthi amazwe aseMpumalanga kuze kube manje? Nokho, e-Europe, kodwa ngoba nje ngokuthi futhi e-United States, futhi ngisho e-Australia! Nakuba ngabo, lesi sifunda kungenzeka kakhulu entshonalanga noma ngasenyakatho kuka empumalanga. Ngakwelinye ihlangothi, kungani-Australia baseYurophu akulona izwe Eastern, kodwa angomakhelwane e-Indonesia kulokhu impela East?
Impendulo yonke le mibuzo, kanye nabanye abaningi, amanga esikhathini esidlule zomlando zezwe lethu. Kungani? Emazweni ase-Asia ngokuthi emazweni aseMpumalanga kusukela esikhathini lapho abantu baseYurophu nje zokuqalisa ne amazwekazi ezizungezile futhi wenza abakutholile esaqopha umlando. Phela, umlungu ezikhathini zanamuhla is hhayi nje aboshiwe kwelinye izwe, zonke eziyisithupha amazwekazi Zomhlaba, kodwa futhi ukuphoqelela zonke emehlweni abo zomhlaba. Akumangalisi ukuthi enamandla kwezempi, Europe isibe isikhungo futhi lonke impucuko - kuphela azungeze. Namuhla, uma sithi ngakho, kuvele uthi sigxile kithi Eurocentrism. A iholide eliseMpumalanga Ekude, ngasendleleni, namanje edonsela baseYurophu ukuze kwakheke inganekwane yayo lasendulo mayelana exoticism lala mazwe okungavamile. Kuleli zinga, yi-umlungu ndawo, anjenge-Australia, ke akubhekwa ngenxa isiko wayo osempumalanga European kodwa hhayi empumalanga. Njengoba ubona, kuba akuhlali kuphela kwezwe.
Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi "Asia-Pacific" - umqondo ukuthi ihlanganisa indawo ukuhluka womhlaba, ngaphandle kokuthi ezinye ngokomzwelo eziningana. Esikhathini esifundeni Asia-Pacific ihlanganisa zithi emazwekazini amane (I-Asia, e-Australia, iNyakatho neNingizimu Melika), ne ukufinyelela Pacific Ocean. Ukuze futhi basonta Oceania.
Yiqiniso, evame ukubuzwa yibo bonke lala mazwe okwazisa isithakazelo geopolitical ePacific. Lokhu kuholela, kulolu hlangothi, kuya Ukubambisana eduze zezombangazwe nezomnotho, futhi ngakolunye - ezingxabanweni gqwa phezu imithombo ezimbili kuyiPacific Ocean nethonya esifundeni. Ngokuqondene umbala ngokomzwelo ngesikhathi ukuzisho ngokwenu lezi mazwe, thina sibuyele kulo mbuzo yokuthi kungani amazwe ase-Asia ngokuthi emazweni aseMpumalanga. Phela, akukho ngozi eminyakeni yamuva, abantu abaningi eYurophu naseMelika ungaqiniseki ukuthi igama leli empumalanga noma izwe entshonalanga Japan. Noma ukuze wazi ukuthi umhlaba zihlanganisa South Korea, isibonelo. Nalapha futhi isimo akusona indawo kangaka womhlaba, kodwa kunalokho ifomu kwamasiko, lapho ilizwe sikhombisa nezwe. Far Eastern State eminyakeni yamuva kuye ababoniswe kukhula okusezingeni eliphezulu kwezomnotho, izimboni kanye nomphakathi esekelwe Western zobuchwepheshe, ukuthi kunzima attribute esiyingqayizivele yabo kuphela impucuko asempumalanga. Kufanele nokho kukhunjulwe ukuthi Asia namanje ngempela abaqotho ukuba amagugu zazo zendabuko, ukufunda ukuhlanganisa nabo ubuchwepheshe Western.
Ngakho, ngasekupheleni kwekhulu nesishiyagalolunye Japanese phakathi nenkathi yezinguquko ezinkulu ezweni bakhe bememezela imfundiso ka "kokutai", okungase elihunyushwe kanje: ". Ubuchwepheshe Western futhi umoya Japanese" Ukuqaliswa ngokugcwele lokhu imfundiso kungaba mhlawumbe kumelwe kugujwe engxenyeni ngekhulu leminyaka lamashumi amabili futhi namuhla yesibili. Bakwazi ukudala zamagama iphila intando yeningi Western nobuchwepheshe kanye clan ukwethembeka, isibe umoya ezinkampani Samurai. Ngokufanayo, thina wadlula namanye amazwe eNingizimu-mpumalanga Asia. Empeleni, yingakho amazwe ase-Asia ngokuthi emazweni aseMpumalanga.
Ukuhlaziywa komnotho inkampani
Petersburg labantu: usayizi, ukubunjwa, ukusatshalaliswa,
Osteochondrosis wesibeletho kanye IRR: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Iresiphi Izintandokazi ingulube izimbambo